कमेडी च्याम्पियन फागुन २१ बाट प्रशारण हुने
काठमाडौँ । कमेडी च्याम्पियनको दोस्रो सिजन फागुन २१ गतेबाट प्रशारण हुने भएको छ । बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै शोको औपचारिक घोषणा गरिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सिजन २ पहिलो सिजनभन्दा भब्य हुने यसका निर्देशक विशाल भण्डारी दाबी गरेका छन् । विस्तृतमा
यसरी सुरु भएको थियो अभिनेता अल्लु अर्जुनको अभिनययात्रा
मंगलबार तोकियो ३ प्रतिक्षित बलिउड फिल्मको प्रदर्शन मिति
१० तस्बिरमा बलिउड अभिनेत्री कृति सेनन
आफ्नै ट्रेलर हेर्दा घोसेमुन्टो लगाउने यी अभिनेत्री
काठमाडौँ । चलचित्र ‘द ब्रेकअप’को ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा जब एउटा दृश्य आयो, ट्रेलर लञ्चमा उपस्थित सबैले मुखामुख गर्न थाले । कार्यक्रममा नायिका शिल्पा मास्के र नायक आशीरमान देशराज थिए । ट्रेलरको एक दृश्यमा नायकले नायिकाको स्तन दुई हातले च्याप्प समातेको देखियो ।
यसरी सुरक्षाको बोली चिप्लिएपछि...
काठमाडौँ । आफू कस्तो चरित्रमा फिट हुन्छु भन्ने हेक्का नराखी अभिनय गर्ने कलाकारको कमी छैन, फिल्म नगरीमा । कतिले चलेका ब्यानर भनेपछि थारै पारिश्रमिकमा काम गरेका पनि छन् । राम्रो फिल्म पाए सित्तैमा काम गरिदिन्थे भन्नेको पनि कहाँ कमी छ र !
काठमाडौँ । ‘नानी पाउनु कहिले, कोक्रो बुन्नु अलिहे’ भन्ने आहान कसैलाई ठ्याक्कै मिल्छ भने त्यो प्रियंका कार्की र उनको हुनेवाला पति आयुष्मानलाई नै मिल्छ ।
को थिए रेखाका श्रीमान् ?
एजेन्सी । बलिउड चर्चित अभिनेत्री रेखा उमेरले ६३ वर्षकी भइन् ।
कुनै समय कंगाल बनेका थिए यी बलिउड कलाकारहरु
साम्राज्ञीको इन्स्टाग्राम ह्याक
काठमाडौँ । पछिल्लो समयकी ब्यस्त नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको सामाजिक संजाल इन्स्टाग्राम ह्याक भएको छ ।
अर्जुन कपुर मलाईकाको बिहे कहिले ?
काठमाडौँ । बलिउडका लभवार्ड अर्जुन कपुर र मलाइका अरोडाले हरेक समय साथै बिताउने गरेका छन् । यहाँसम्म कि उनीहरु पारिवारिक पार्टीमा समेत सँगै पुग्ने गरेको देखिन्छ ।